July, 2019 | Job Vacancy in Myanmar
2019-07-30 22:32:11 , Hi Hi Hi..August လအတွက် ထူးရှယ…
Hi Hi Hi..August လအတွက် ထူးရှယ်သင်တန်းလာပါပြီရှင့်..
သင်တန်းကြေး ၁ယောက် ၂သောင်းကျပ်သာ ?????
ကဲ 12 လပိုင်း စာမေးပွဲဖြေမယ့် ကိုကိုချောချောလေး မမချောချောလေးတို့အတွက် N5 မှ N4 ထိ ထူးရှယ် level သင်တန်းများစတင်လက်ခံ နေပါပြီရှင့်.
မိမိတတ်ရောက်သည့် Level 1ခုစီတိုင်းကို သင်ခန်းစာ တခန်းခြင်း စနစ်တကျလေ့ကျင့် စစ်ဆေးသင်ကြားပေးခြင်း?
Grammer, Kanji တို့ကို လုံးဝအပိုင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း?
Listening, Reading ပိုင်းကို ပြနိလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင် သင်ကြားပေးခြင်း ?
စာမေးပွဲ မေးခွန်းဟောင်းများ စစ်ဆေးပေးကာ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း?
#သင်တန်းကာလကြာချိန်(၄လ) တလ ၂သောင်းကျပ် သာ ??
#သင်တန်းတည်နေရာ က ဆူးလေအနီးမှာဆိုတော့ သွားလာရအဆင်ပြေစေပါတယ်ရှင်….
အသေးစိတ်ကို 09446098913 ကိုသာ ဆက်သွယ် စာရင်းပေးထားပါနော်.
This entry was posted in Training and Class on 2019-07-30 by admin.
2019-07-25 18:40:03 , Please admin LCCI level1+2 (F…
This entry was posted in Training and Class on 2019-07-25 by admin.
2019-07-22 18:29:59 , မင်္ဂလာပါခင်ရှင် … သီတင်းကောင…
August 3ရက်​ 4ရက် Sat ,Sun ဖွင့်​မဲ့အတန်းသစ်​​လေးပါခင်ရှင့် ….
Singapore International Certificate​ & USA DBA တန်းထိလည်းဆက်တက်​လို့ရတယ်​​နော်​။
သူငယ်​ချင်း​သုံးယောက်နှင့်အတူ ဒါမှမဟုတ် August လ 1 ရက်နေ့မတိုင်ခင်လာရောက်အပ်နှံပါက 10% discount လည်းရအုန်းမှာပါနော် သူငယ်ချင်းတို့ ??
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ==>>09797531818 ,09 797530707 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ရှင့်
This entry was posted in Training and Class on 2019-07-22 by admin.
2019-07-14 19:44:20 , အလုံးအသစ်လေးတွေပါတယ်နော် ​ဈေ…
This entry was posted in Training and Class on 2019-07-14 by admin.
2019-07-07 19:24:45 , Plz admin လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှ…
Plz admin?? လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ English စာကို professional ကျကျဘယ်လိုသုံးမလည်း သူများထက် နှာတစ်ဖျားသာထားဖို့လိုမယ်နော် email,gmail professional ကျကျရေးတတ်ဖတ်တတ်ပြောတတ်အောင် အချိန်တိုအတွက်းမှာ native speaker တစ်ယေညက်ဖြစ်အောင် သင်ကြားပို့ချပေးမှာပါနော် july 20 စမှာပါတဲ့ ???တစ်တန်းတက် တစ်တန်းfreeလည်းရှိသေးတယ်နော်??Certificate In Business English (CBE) Business English သင်တန်းလေးလာပါပြီ…#ပညာပါရမီ_တာမွေ#သင့်ရဲ့ English လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ပညာပါရမီမှာ သင်ကြားဖွင့်လှစ်တော့မယ့် Certificate in Business English စာသင်တန်းကို အခုပဲတက်ရောက်ဖို့ အကြုံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်..
☎ 09978902345 , 09764158055 ☎… More
This entry was posted in Training and Class on 2019-07-07 by admin.
2019-07-07 17:19:04 , Plz admin HR levelတက်ပြီးထား…
Plz admin ???
Management levelရောက်လို့ ဦးဆောင်ပြီးစီမန်ခန့်ခွဲတော့မယ်ဆို အခြေ ခံကြတဲ့ Administration ပိုင်းဖြစ်တဲ့ data collecting နဲ့ data controlပိုင်းကို သိထားဖို့အရမ်းအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်နော် ပညာပါရမီမှာ HR admin,နဲ့ office management ပိုင်းလေး july 21ရက်နေ့စတင်သင်ကြားပေးသွားမှာပါနော် 16ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားအပ်လို့ရပါတယ်နော်???
2019-07-02 12:02:44 , လစာထုတ်ပြီးရင် ဘာသင်တန်းတွေတက်ဖို့စဉ်းစားထားလဲ?
Plz admin ?? ဘော်ဘော်တို့ရေ အတန်းသစ်တော့မှာတဲ့နော် Discountလေးအမှီသွားအပ်လိုက်ကြနော် ??
This entry was posted in Training and Class on 2019-07-02 by admin.